Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni eyakhi - I-Airbnb
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni eyakhi
Saléchan, Occitanie, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Isabelle
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Eph 24.
Itholakala emaphethelweni ehlathi, endaweni ephakeme yedolobhana elibukekayo lase-Saléchan, le ndawo evulekile nekhanyayo imnandi kakhulu. Phezulu endlini, enokubukeka okuhle kwedolobhana ne-Piz du Gar, kunenye inzuzo, ukusondelana kwayo nehlathi elinikeza uhlangothi olunokuthula nolusendle. Ngaphakathi, izinkuni, ukuphakama kophahla, ama-mezzanines angu-2, kodwa futhi nokuhlobisa kwayo ngezinto zakudala, kwenza le studiyo enkulu ibe yindlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ejabulisayo nefudumele.
Ihlelwe kahle ukuze ihlalise umndeni wabantu abangu-4. Noma kunjalo, ngemibhede engu-3 eyengeziwe, ingahlalisa abantu abangu-7 ngokukhethekile. Yakhiwe ngamakhona amakamelo okulala angu-2 kuma-mezzanines angu-2 ahlukene. Umbhede owodwa onombhede ongu-140 kanye nomatilasi owodwa waphansi kanye nomatilasi wesibili onemibhede engu-2 90. Ukuze ufinyelele izindawo zokulala, kufanele ukhuphuke ngesitebhisi futhi izindawo zokulala ziphansi kusilingi ngoba i-mezzanine. Kulabo abangafuni ukuba ku-mezzanine, ungalala egumbini lokuphumula embhedeni wosuku.
ubusuku obungu-7 e- Saléchan
Idolobhana lase-Saléchan litholakala amakhilomitha angu-20 ukusuka e-Bagnères de Luchon; ngaphansi kwe-Pyrenees, eduze nomngcele wase-Spain. Leli dolobhana lihle kakhulu ngoba linenhliziyo yalo, isonto lalo, ihhovisi lalo lokuposa, hhayi emnyangweni, kodwa endaweni ephakeme. Izindlu zayo zamatshe, imigwaqo emincane eyakha i-labyrinth, iziphethu, amanzi amahle, namahlathi amakhulu e-beech azungezile, anikeza i-Saléchan isimo esinokuthula lapho kukuhle ukuhlala khona.
Adepte de Airbnb pour mes voyages, soucieuse de rendre service et en même temps d'arrondir mes fins de mois, je suis heureuse de louer ce studio que j'ai aménagé pour les touristes de passage dans la Barousse où je viens de m'installer après avoir vécu à Toulouse.
Adepte de Airbnb pour mes voyages, soucieuse de rendre service et en même temps d'arrondir mes fins de mois, je suis heureuse de louer ce studio que j'ai aménagé pour les tourist…
Njengoba ngihlala lapho, ngingakujabulela ukukubungaza futhi ngikusize phakathi nokuhlala kwakho. Kodwa uma ngingaphandle kwedolobha, kunesikhiye esiphephile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Saléchan namaphethelo